Wariyaasha Puntland ” Nama matalan xubno ka qeybgalaya shirka London+Sawiro – SBC
Wariyaasha Puntland ” Nama matalan xubno ka qeybgalaya shirka London+Sawiro
Posted by Webmaster on May 6, 2013 Comments
Wariyaasha ka hawlgala deegaanada Puntland ayaa maanta kulan balaaran oo ay isugu yimaadeen magaalada Gaalkacyo waxay ku caddeeyeen in aysan matalin rag la sheegay in ay sheegteen magaca saxaafada Puntland in ay matalaan oo ka qeybgalaya shirka London ee ku saabsan arimaha Soomaaliya.
Suxufiyiinta ayaa sheegay in ay heleen xog ku saabsan in shirka London lagu casuumay Wariyaal ka tirsan Saxaafada Puntland kuwaasi oo qeyb ka noqonaya wariyaal lagu casuumay in ay soo tebiyaan warbixinada ku saabsan shirka London, hase ahaatee Wariyaashii lagu casuumay shirka kuwa aan ahayn ay ka qeybgaleen arintaasi oo ah mid khiyaano ah oo lagu sameeyay Wariyaasha ka hawlgala Puntland.
Gaba-gabadii shirka Suxufiyiinta Puntland ee ka dhacay gobolka Mudug ayaa waxaa laga soo saaray Bayaan lagu caddeynayo ujeedka shirka iyo waxyaabaha looga hadlayo oo ah in laga been abuurtay saxaafada Puntland, maadaama London shirka ka dhacaya ay aadeen rag aan suxufiyiin ahayn oo ku baxay magaca wariyaasha Puntland.
Bayaanka suxufiyiintu soo saareen ayaa ka koobnaa qodobadan.
1. Annagoo ah wariyaasha ka hawlgala Puntland waxaan caddeyneynaa in aysan na matalin xubnaha wariyaal ahaanta loogu casuumay shirka London.
2. Waxaan kaloo caddeyneynaa in Wariyaasha laga qeybgeliyay shirka London ay yihiin wariyaal laga qaaday magaalada Muqdisho, magaalada Muqdishana in aysan ahayn Soomaaliya oo dhan.
3. Waxaan dalbanaynaa in la baaro cidd ka soo shaqeysay soo xulista wariyaasha ka qeybgalaya shirka London, dadkaas oo aan oran karno uma aysan cadaalad sameyn hawsha loo xil saartay oo ah in ay soo xulaan wariyaashii ku haboonaa in ay ka qeybgalaan shirka ee matalaya warbaahinta deegaanada Puntland.
4. Waxaan Madaxda dawladda Britain ee shirka London martigelinaysa, Ururada saxaafada Soomaaliya iyo kuwa caalamiga ahba u sheegaynaa in aan loo cadaalad sameyn wariyaasha ka qeybgalaya shirka London, xubnaha shirkaasi ka qeybgalaya ee matalaya saxaafada Soomaaliyeedna ay yihiin dad si hoose looga qaaday magaalada Muqdisho.